Ezona ZONZO ZOKUFUNDA kwiifowuni eziphathwayo ezivela kubaqhubi | I-Androidsis
Kukho inani elikhulu le abaqhubi beefowuni, namhlanje ezinye zazo zaziwa ngcono kunabanye, nkampani kubekwe endaweni kunye nabanye abasebenza namanye amaqela abantu abavela kwamanye amazwe. Uninzi lwezi abaqhubi Zime kakuhle kwimarike, ezinye zazo ziinkokheli zendlela kwamanye amazwe nakwamanye amazwe. Kule ndawo ungafumana ulwazi olunxulumene abaqhubi beefowuni esinokuthi siyifumane, ukuze sazi iirhafu kunye nezibonelelo zabo lukhetho olukhulu lokukhetha ukuba yeyiphi esifuna ukubonisana nayo.
Apha ngezantsi uyakufumana izibonelelo ezingcono kwimfonomfono kunye nabaqhubi abaziintloko abahambahambayo (iMovistar, iOrange, iVodafone, iAmena kunye nokunye) ukuze ukwenza ukubambeka okutsha okanye ubhaliso kungabizi kakhulu. Thatha ithuba lesaphulelo kwaye ufumane iifowuni ezingabizi kakhulu kwezi zinto zibonelelweyo:
Ukuphucula ukugubungela iselfowuni: amaqhinga, izikhuthazi kunye neengcebiso
I-2020 ngunyaka apho ukugubungela i-5G kuya kuqala ukuba yinyani kwamanye amazwe anje ngeSpain, ...
Uyicwangcisa njani i-APN ukuba ibe nedatha ephathekayo
I-APN (igama lendawo yokufikelela) ligama lendawo yokufikelela namhlanje emiselwe ngu ...
IVodafone izisa i-5G izula kwiidolophu ezingama-55 eYurophu
IVodafone yinkampani ebithumela i-5G kumazwe aliqela eYurophu kwiiveki ezimbalwa, kubandakanya ...
I-5G ifika eSpain kule veki ivela esandleni seVodafone
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo kuqinisekisiwe ukuba iVodafone izakuzisa i-5G eYurophu kweli hlobo, njengoko sele ...
UMzantsi Korea sele unabasebenzisi abasisi-1 se-5G
Ilizwe lokuqala ukuba nenethiwekhi ye5G ngentengiso yayiseMzantsi Korea ngo-Epreli. Utyikityo olufana ...
IVodafone ibonelela ngenkonzo yenethiwekhi ye-5G kwizixeko ezihlanu e-Itali
Iinkqubo zenethiwekhi ze5G ziyaqhubeka nokwanda kwihlabathi liphela. Amazwe afana noMzantsi Korea, i-United Kingdom, iSwitzerland kunye neMelika ...
INokia isebenzisa ithuba elibi likaHuawei ukwandisa ubukho bayo kwi5G
Iingxaki ziyanda kwiHuawei. Inkampani yaseTshayina, enokuba nethuba lokuzisindisa, iyayibona indlela intengiso yayo ...
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, ukuzulazula kudlule kwi-European Union. Inyathelo lokuqala ...
Amanye amazwe anenethiwekhi esebenzayo ye-5G ngaphezulu nje kwenyanga. UMzantsi Korea yayingu ...
Amapolisa kaZwelonke kunye neorenji alumkisa malunga nemiceli mngeni yentsholongwane koyena mncinci
Amapolisa eSizwe kunye neorenji ngamacala amabini aqala eli nyathelo litsha libizwa ngokuba # PorunusoLovedelatecnología. Ndiyazi…
Iminyaka emithathu eyadlulayo uGoogle wazenzela opharetha eMelika. Yayiyinto eyenziwe yinkampani ngendlela ...
Ezi ziintetho zeMásMóvil zoLwesihlanu oMnyama
Hlaziya i-smartphone yakho ngolwesiHlanu oMnyama wo-Yoigo
Ungasifaka njani isivumelwano senqanaba lasimahla leFreompompop 4G okanye indlela yokucela utshintsho lweSIM ukuba sele ungumthengi
[Ukuhlaziywa] Inkohliso yokuphucula isantya sikaYoigo. (Ukufumana amaqela angama-800 Mhz kunye nama-2600 Mhz). Ngena ukuze ubone ividiyo.
Ungayenza njani ukuba ungasebenzi voicemail
Ungaphuma njani kubhaliso kuYa Voy de Movistar kwaye ungafi uzama